မေးမယ် ၊ ဖြေမယ်
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Networking Problems » မေးမယ် ၊ ဖြေမယ်
1 မေးမယ် ၊ ဖြေမယ် on 28th February 2011, 5:00 am
ကို rat နဲ့ကျွန်တော် nGr69 တို ့ရဲ ့
ကို rat ကဖြေပြသွားမှာပါ
ကျွန်တော့်ကို mail ပို ့ပြီးတော့ဘဲဖြစ်ဖြစ် pm ပို ့ပြီးတော့ဘဲဖြစ်ဖြစ်
အဖြေအတွက်ကတော့ ကို rat ဆီကိုပေါ့နော်
ပထမ ဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ ့
network သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို ့အတွက်
(ကိုrat ရေလိုတိုရှင်းတော့မလုပ်နဲ ့နော် ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖြေပေးနော်)
2 Re: မေးမယ် ၊ ဖြေမယ် on 28th February 2011, 8:47 am
Network Engineer တယောက်ဖြစ်ဖို့ အတွက် အခြေခံနေနဲ့ A+ Hardware ပိုင်းကို အတန်အသင့် နာလည်တတ်ကြွမး်ရပါမယ် ပြီးရင်တော့ Net+ သင်တန်းတတ်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော် သင်တန်းမတတ်နိုင်သူတွေကတော့ မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ ဦးဇော်လင်းရဲ့ စာအုပ်တွေကို၀ယ်ဖတ်ပါ သူရေးထားတာလေးတွေလဲ အတော်ကိုကောင်းပါတယ် အဲဒီလိုဖတ်ပြီးအခြေခံလေးရလာပြီဆိုရင် Network Infrastructure, Network Management & Administration, Network Security ပိုင်းတွေကို ရွေးချယ်လေ့လာပါ
ဒီလင့်ထဲမှာ လေ့လာသင့်တဲ့ ဆိုဒ်လေးတွေ ရှိပါတယ် အဲဒီမှာလေ့လာပါ လေ့လာရင်းနဲ့မှ မသိတာလေးတွေရှိလာရင် ဒီဖိုရမ်လေးရဲ့ Networking Problem အောက်ထဲမှာ Topic ဖွင့်ပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်
3 Re: မေးမယ် ၊ ဖြေမယ် on 15th March 2011, 10:20 am
ကို rat ရေ ဒီတစ်ခါတော့
ခနခနကျတတ်တဲ့မြန်မာကွန်နဲ့ပတ်သက်တာလေးမေးချင်တယ်ခင်ဗျာ
Ultrasurf တို့Freedom တို ့နဲ ့ကျော်ဝင်ကျော်သုံး
ကျွန်တော်မေးချင်တာက server ကနေကျော်ပေးထားမယ်ဗျာ
clients က မကျော်မခွဘဲ သုံးလို ့ရနိုင်မလားခင်ဗျာ
(ကျွန်တော် isa 2006 သုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာ)
4 Re: မေးမယ် ၊ ဖြေမယ် on 15th March 2011, 11:23 am
nGr69 ရေ yourfreedom မှာအဲ့ဒီ function ပါတယ်ဗျ ကျနော်စမ်းဖူးတယ်.
yourfreedom ရဲ.port setting မှာ Relay for other ဆိုတဲ check box လေး click လိုက်ရင်ရတယ်ဗျ။ client ကနေသုံးမယ်ဆို ရင် server ရဲ. IP နဲ.Port ကတော့ 8080 လို. Browser မှာထဲ့ပေးရမယ်ဗျ။
5 Re: မေးမယ် ၊ ဖြေမယ် on 24th February 2012, 3:58 pm
ကျွန်တော် Wireless Network တစ်ခုလုပ်ချင်လို့ Access Point တွေအကြောင်း သိပ်မသိလို့ အချိန်ရရင်ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Wireless က Security အားနည်းတော့ ဘယ်လိုထိန်းချုပ်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာလဲသိချင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာအလွယ်တကူ၀ယ်လို့ရပြီး တပ်ဆင်ရ configuration လုပ်ရတာအဆင်ပြေမှလည်းဖြစ်မှာပါ။ TP-Link TL-WA801ND - Wireless access point လိုဟာမျိုးတွေကရော အကယ်လုပ်ရကိုင်ရတာ အဆင်ပြေပါသလား။
6 Re: မေးမယ် ၊ ဖြေမယ် on 20th April 2012, 10:15 am
ကၽြန္ေတာ္ရုံးမွာထုိင္ထားတာက Windows Server Enterprise Edition SP 1, DNS,DHCP,AD,RAS,FILE SERVER. User ေတြကို အရင္က domain နဲ႕ေပးထားတယ္ဗ်။ ခုေနာက္ပိုင္းမွာကၽြန္ေတာ္မလာခင္မွာ workgroup ျပန္ေပးထားတယ္။ server ထဲမွာေတာ့ဗ်ာ။ files and folder ေတြကို share ေပးထားတယ္။ ဘယ္ user က ဘယ္ permission ေပါ့ဗ်ာ။ ခုျဖစ္တာက sale ဆိုတဲ့ folder ေအာက္က ဖိုင္တစ္ခုခုေပါ့ဗ်ာ အဲသည္ဖိုင္ကို user က သူ႔ကြန္ျပဴတာကေနဖြင့္မယ္ဆိုရင္ ဒီအတိုင္းဆို ဖြင့္လို႔သိမ္းလို႔ရတယ္။
အင္တာနက္ပါတစ္ျပဳိင္တည္းသုံးမယ္ဆိုရင္ အဲသည္ဖိုင္ကိုဖြင့္ဖို႔အၾကာၾကီးေစာင့္ရတယ္ဗ်ာ အဲဒါေလးကိုမေျဖရွင္းႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ကူညီျပီးလမ္းညႊန္ေပးၾကပါဗ်ာ။
အင္တာနက္ကိုက antamedia hotspot သုံးထားတာပါ။
7 Re: မေးမယ် ၊ ဖြေမယ် on 24th May 2012, 1:06 pm
ကိုdeep471 နဲနဲေလာက္၀င္ေဆြးေႏြးပါရေစ reply လုပ္ထားတဲ့သူလည္းမရိွလို႔ပါ။ တကယ္ေတာ့ အင္တာနက္သံုးတာနဲ႔ ဖိုင္sharing လုပ္တာက အဲဒီလိုျပသနာမ်ိဳးျဖစ္စရာကိုစဥ္းစားၾကည့္ရင္ gateway နဲ႔ preferred DNS ရယ္ Alternate DNS စတာေတြမွားယြင္းေနရင္ေတာ့ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ internet share ကိုဘယ္လိုလုပ္သလဲ PDC ဘယ္လိုထိုင္ထားလည္းဆိုတာေတြေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ဥပမာ PDC ထိုင္ၿပီး client ေတြကို Domain client လုပ္မထားရင္ file sharing လုပ္လည္း server administrator password လိုပါမယ္ ေနာက္ၿပီး IP ကလည္း PDCနဲ႔ အုပ္စုတူရပါလိမ့္မယ္ preferred DNS ကိုလည္း PDC ရဲ႕ IP ကိုညႊန္းရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ Gateway ကိုေတာ့ router ရဲ႕ IP ကိုညႊန္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ Alternate DNSမွာလည္း router ရဲ႕ IP ထည့္ေပးရပါတယ္။ အဲဒါမွ အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ တခုျပသနာက client ေတြကcomputer တခါဖြင့္တိုင္း server ရဲ႕ user name & password တႀကိမ္ရိုက္ထည့္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ေကာင္းဆံုးကေတာ့ client ကို domain user ေျပာင္းေပးလိုက္တာပါဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာထားတာေတြ တခုမွမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ တျခားညီေနာင္ေတြဆီက ပညာယူယံုေပါ့ဟီးးး။
8 Re: မေးမယ် ၊ ဖြေမယ်